लहानमा पहिलो पटक फेसन शो तथा म्युजिकल ईभेण्ट हुने, मोडलको लागि अडिसन खुल्ला - Glamorous Icon
८ जेष्ठ २०७६, बुधबार १६:४८
Home›GIcon News›लहानमा पहिलो पटक फेसन शो तथा म्युजिकल ईभेण्ट हुने, मोडलको लागि अडिसन खुल्ला
जनकपुरधाम/ सिरहाको लहानमा पहिलो पटक फेशन फेस्ट शो एण्ड म्युजिकल ईभेन्ट हुने भएको छ । एल एण्ड एन मोडल एजेन्सी प्रालि काठमांडौले लहानमा यहि जेठ ११ गते फेशन फेस्ट शो एण्ड म्युजिकल ईभेन्टको अडिसन गर्ने जनाएको छ । युवायुवतिमा रहेको अन्तरनिहित प्रतिभालाई उजागर गर्न ईभेन्टको आयोजना गर्न लागिएको एल एण्ड एन मोडेल एजेन्सीको म्यानेजिङ्ग डाईरेक्टर नितेन्द्र कर्णले जानकारी दिए ।
फेशन शो मा १४ बर्षदेखी ३० बर्षसम्मका युवायुवतिहरु सहभागी हुन् सक्ने आयोजकले जनाएको छ । अडिसनमा छनोट हुनेहरुलाई निःशुल्क मेकअप, फोटोशूट, प्रमोसन भिडियो लगायतका बारेमा तालिम दिईने डाईरेक्टर कर्णले बताए ।
लहानमा पहिलो पटक हुन लागेको फेसन शो मा सहभागी हुन सम्पुर्ण ईच्छुक युवायुवतीहरुलाई आयोजकले आग्रह गरेका छन् । अडिसन होटल गोधुलीमा बिहान ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म हुनेछ । सो ईभेण्टको मिडिया पार्टनर डिथ्री अनलाईन तथा युट्युब च्यानल डिथ्री टिभी लगायतका मिडियाहरु रहेका छन् ।
कोट पाइन्टमा ठाँटिएक धिरज मगर
पिता बन्दैछन् कपिल शर्मा ?
‘वान नाइट स्ट्यान्ड’ को ट्रेलर रिलिज (भिडियो)
अशिष्मा पाउन सलोन र आमेशबीच हानथाप !
Celebrate your New Year Eve with Shuvani Moktan & Band
उल्सन र सन्ध्याको ‘तरकारी’